Abantu abaningi bafuna ukuziqalela amabhizinisi abo, kodwa bambalwa bayazi indlela ngokukhalipha ngoba ukuthatha. Sesha utshalomali? Bhala uhlelo lwebhizinisi? Sungula othintana nabo abalingani noma amakhasimende ukunqoba inhliziyo yakho? Okwakusele kwasekuqaleni? Phendula lo mbuzo kuzosiza imodeli yebhizinisi. Uma uthi nhlá, konke kubonakala kulula. Sinikeza amasevisi noma izimpahla - futhi ukuthi ukuthola imali. Kodwa eqinisweni, izinqubo kanye ubuhlobo iyinkimbinkimbi kakhulu kunalokho. Imodeli yebhizinisi uchaza nomqondo kanjani inhlangano kudala amafa eziphathekayo noma angaphatheki, ukuthi ibhebhetheka kanjani nokuthi izimali zabo zihlobene imiphumela yemisebenzi yabo.
Ukuze yethule umbono walokho okubizwa ngokuthi oluphelele futhi yehlukene kaningi okubalwa, kuyodingeka ukuba uphendule imibuzo ethile, ukucacisa inombolo nemingcele. Nansi enye yezindlela eziyinhloko, njengemodeli yebhizinisi lingathuthukiswa.
Okokuqala, anqume ngalolo amakhasimende. Obani abayoba amakhasimende ayinhloko? Hlaziya izethameli eziqondiwe - yobudala, ubulili, isimo sezimali amakhasimende, kanye siyoba yini ngabo umkhiqizo noma umsebenzi - a sokunethezeka noma njengento edingekayo wokuqala.
Okwesibili, thola ukubaluleka - okuyinto ukuhlangabezana nezidingo iklayenti sika umkhiqizo wakho, lokho izinkinga zabo ixazululwe? Ingabe lokho kufanele anikele ephumelelayo, esebenza kahle futhi mhlawumbe eshibhe? Ngayinye yalezi amagugu ngendlela yabo kuthinte yebhizinisi yalezi kuzoncika nomqondo ukukhangisa, kanye nenqubomgomo zamanani. Ngaphezu kwalokho, uma kungenjalo kuzothatha ukuthuthukiswa icala.
Okwesithathu, cabanga iziteshi marketing. Kanjani ufuna nabo namakhasimende akho? Ingabe kuzoseshwa Boutique, noma mhlawumbe esitolo online noma izincomo inethiwekhi? Ingabe zokuxhumana ozoba ubuso nobuso noma nje ngenethiwekhi noma ngocingo?
Okwesine, cabanga ngobuhlobo, okungukuthi ingxenye ngokwengqondo. Uyini umbono wakho mayelana ungalindela evela kumakhasimende nalokho abiza? Kungakhathaliseki ukuthi idala isithombe lebhizinisi ezingabizi kakhulu futhi ephezulu yomntakabani? Uyobonisa kanjani wena nokwakha ubudlelwano amakhasimende ezingase zivele - by automating inqubo (isib, izincwadi zezindaba, amafomu), noma ngeke bahlanganyele impilo yomphakathi? Kungakhathaliseki ukuthi ufuna ukuhlela imicimbi, izingqungquthela, izingqungquthela, bonisa?
Okwesihlanu, uhlole cash flow. Bangaki amakhasimende akho akhokhe manje futhi zingaki kuyoba ukulikhokhela? Yini iphesenti ukusakaza ngenzuzo ezahlukene ibhizinisi? Ezinye acabangele lokukhokha isikhathi, abanye becela ukuthi ngabe iphakheji amasevisi, nabanye - ubulungu, owesine - ngqo yokuthengisa.
Okwesithupha, cabanga nezisetshenziswa imodeli yakho yebhizinisi luzosuselwa. Isibonelo? zokudla lombhali, ukushicilela izindlu, ejensi, okungukuthi, ezimweni lapho idumela ibhizinisi kusekelwe isithombe nedumela yomnikazi. Noma ingabe imithombo esunguliwe, efana igama ngalokuphatselene nelwati, emakhono, ubudlelwano esungulwe nokuxhumana emphakathini. imithombo yemvelo ngenzuzo - imishini, izimoto, izinhlelo, isofthiwe. Ngokwesibonelo, njengoba ikhasimende ngoba ngeke anakekele ongumnikazi we inethiwekhi itekisi nalokho kwesithunzi nokuhlonipheka kwakhe. Okubalulekile kuwe izinga, ngesilinganiso ukubulawa kwabo oda kanye ukuseviswa yemoto. izinsiza lwezezimali kungaba utshalomali, ukheshi, credit umugqa - abazimisele ukunikeza izimali futhi ngaphansi kwaziphi izimo.
Seventh, iphuzu elibalulekile, okumele ifake incazelo imodeli yebhizinisi, ukwenza. Okufanele do, iziphi izinyathelo okufanele zithathwe ukuze emakethe, ukuthola amakhasimende amasha nokugcina esimweni ubudlelwano ekhona? Mhlawumbe ozokunikela njalo izaphulelo kumakhasimende njalo, ukwethula imikhiqizo noma amasevisi amasha. Noma ngaphambili ukuhlanganyela ngenkuthalo kule ngqungquthela umkhakha, bhala isihloko kumagazini okhokhelwayo.
isigaba lesishiyagalombili, okufanele kubandakanye imodeli yebhizinisi - ke sika abalingani. Lingobani leli qembu? Ungamsiza kanjani kubo, yini izinhlobo zemisebenzi bayoba enze ngawe? Akunakwenzeka zonke okumelwe sithathwe, ngoba kukhona namanye amakhono nolwazi. Zenza ibhizinisi ngokushesha, futhi uthanda ukusebenzisa isikhathi imisebenzi yakhe yokudala. Accounting, ukumaketha, ukuphathwa fan Page imibhalo - konke angadluliselwa abalingani.
Ngemva kokuhlaziya zonke lezi zinto, uzokwazi ukuhambisa umfuziselo olunzulu ibhizinisi ibhizinisi lakho, ukukhomba ukuthuthukiswa Amathrendi futhi ziqala ukuthatha izinyathelo zokuqala endleleni eya empumelelweni.
Ikhaya Smokehouse - isihluthulelo ukudla okunempilo futhi okumnandi
Qasha 1s - high speed futhi akukho amaphutha.
Indlela usethe wokubheka e "Streetracers" umdlalo izimoto ezahlukene?
Potato patties nge ushizi. Potato inhlama for ophaya
Indlela ugeza tulle: Iseluleko esiwusizo, amasu kanye nokubuyekeza
Copacabana Lloret 3 * (Spain, Costa Brava): incazelo ehhotela, izibuyekezo nezithombe
Alamu "Pandora": ukubuyekezwa. Ukufaka alamu imoto Pandora DXL 5000
"LaseBuchenwald alamu": ukudlulisa isikhathi futhi isikhumbuzi
Isiqeshana u-: izinhlobo, izici, injongo
Umuthi 'Xenical ": ukubuyekezwa odokotela hhayi kuphela